Anyị Hụrụ onye ọka iwu taa | Martech Zone
Ọ bụghị ihe ọjọọ.
Kwa izu, ruo ihe karịrị otu afọ, echetarala m ihe ncheta site na ihe iri anọ na atọ Bido Azụmaahịa Na-aga nke Ọma. Nke ahụ bụ iwu dị ogologo! Ibido azụmaahịa bụ otu ihe, ịme ya nke ọma bụ ihe ọzọ.
Enweela m ihe ịga nke ọma na blọọgụ ahụ ma ana m aga n'ihu na-enwe mgbakwunye ndị ọzọ n'ihi blọọgụ ahụ. Izu gara aga a, m mechiri nkwekọrịta abụọ dị mkpa nke 2, ogologo oge yana ọtụtụ ohere maka uto. Na mgbakwunye, mụ na enyi m Stephen esorola na-ewere akwụkwọ nkewa anyị n'ahịa. O doro anya na, ego a ga-enweta site na mbọ ndị a niile ọzọ azụmahịa.
Ewebata Koi Systems, Llc
Tụtụ a, Bill, Carla, M na Jason jigidere ọrụ nke David Castor kwuru na ya ụlọ ọrụ iwu, Alerding Castor, iji nyere aka na mwepụta nke Koi Systems, Llc.
Firmlọ ọrụ David emeela aha pụrụ iche maka mpaghara mmalite ịntanetị. Ndị Mmekọ na Successga nke ỌmaTM bụ usoro usoro nke Alerding Castor. Ha bụ ume nke nwatakịrị, ikuku dị ọcha na ụwa nke iwu azụmaahịa. Ọ bụrụ n’ị nọ na sọftụwia dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ, ụlọ ọrụ David nwere ọpụrụiche na mpaghara ndị a:
Ihe nkedo Castor
Ikikere na Teknụzụ
Internet, Software na Kọmputa Iwu
Nhazi na Nhọrọ Nhọrọ
Iwu Omenala Mba Nile
Drafting na Negotiating Dị Mfe na Mgbagwoju anya nkwekọrịta na Definitive Documents
Njikọ na Nnweta
Nkwekọrịta na-abụghị asọmpi
Anyị etinyeworị oge dị ukwuu na azụmaahịa anyị ma chọọ ijide n'aka na anyị wepụtara ya nke ọma, yabụ na nke a bụ usoro ziri ezi! Ndị ụlọ ọrụ David nwere ntụkwasị obi nke ọma na ụlọ ọrụ ntanetị, mmalite ntanetị na ngwanrọ dịka ụlọ ọrụ Ọrụ.
David kọọrọ anyị ọ hisụ ya na-arụ ọrụ n'akụkụ ndị ọchụnta ego iji mee ka nrọ ha mezuo. Anyị na-ele anya ịmalite nke anyị!
Tags: na -eme mkpọtụọka iwukoi usoro
Brian's Threaded Comments: Kachasị mma
Churchlọ ọrụ Kevin
Sep 6, 2008 na 12: 11 AM
Chei, Douglas! Ndeewonu! Nke a dị ka ihe dị ịtụnanya maka nzukọ gị.
Sep 6, 2008 na 1:35 PM
Daalụ Kevin! Anyị enweela ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ. Chris Baggott nke Compendium Blogware na Kristian Andersen Ha abụọ nwere nnọọ mmesapụ aka ma nye anyị ọtụtụ ndụmọdụ.